Qorshaha horumarinta iyo miisaaniyadda dalka oo muqdisho looga hadlay. – Radio Daljir
Qorshaha horumarinta iyo miisaaniyadda dalka oo muqdisho looga hadlay.
Oktoobar 24, 2016 6:19 b 0
Muqdisho, Oct 24 2016–Ra’iisul Wasaare Ku-Xigeenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cumar Carteh ayaa maanta gudoomiyay shir ku saabsanaa sidii loo waafajin lahaa miisaaniyadda 2017 qorshaha horumarinta qaranka, waxanaa ka soo qeygalay Wasaaradda Maaliyadda, Wasaaradda Qorsheeynta Qaranka, iyo Gudigga shaqaalaha rayidka.
“Qorsha Horumarinta Qaranka waa mid dalka horumar dhaqaale gaarsiinaya; sidaa awgeed waa muhiim in miisaaniyadda 2017 aan ku saleyno, Waxaana howshaa ka shaqeyn doona guddi ka kooban Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha, Wasaaradda Maaliyadda, iyo Wasaaradda Qorsheeynta Qaranka”.
DHEGEYSO-Madaxweyne Gaas oo si kulul uga hadlay dagaalka Galkacyo.
DHEGEYSO-Madaxweynaha Puntland oo kasoo degey garoonka Boosaaso.